Shirkadda Caanka Ah Ee Dahabshiil Oo Iska Fogaysay Inay Iibsatay Shirkad Ka Mid Ah Isgaadhsiinta Somaliland Oo Albaabada Loo Xidhay Todobaadkii Hore – Araweelo News Network (Archive)
Shirkadda Caanka Ah Ee Dahabshiil Oo Iska Fogaysay Inay Iibsatay Shirkad Ka Mid Ah Isgaadhsiinta Somaliland Oo Albaabada Loo Xidhay Todobaadkii Hore
Hargeysa(ANN) Shirkadda Caanka ah ee Dahabshiil, ayaa iska fogaysay inay iibsatay, ama ay qayb ka tahay Isbedelka Maamul ee Shirkadda TELCOM, taas oo ka mid ka mid ah shirkaddaha Isgaadhsiinta Somaliland. kadib markii ay warbaahinta Somaliland qaarkood
faafiyeen maalmihii lasoo dhaafay warar la xidhiidha arrintaa.
Warsaxafadeed ka soo baxay shirkadaha Dahabshiil maanta ayaa si rasmi ah u caddeeyay in warka saxaafada qaar ku soo baxay ee ah in shirkada Dahabshiil iibsatay shirkada Telecom aanu run ahayn oo yahay ku-tiri-ku-teen, mala-awaal ah oo xaqiiqada ka fog.
War-saxaafadeedka Shirkadda Dahabshiil kasoo saaratay warkaa oo ka soo baxay Xarunta Shirkaddu ku leedahay magaalada Hargeysa, waxa uu u dhignaa sidan;-
“Waxa beryahan dambe warbaahinta kala duwan ee Soomaalida ku soo baxayey warar kala duwan oo sheegayey in Shirkadda Dahabshiil la wareegtay mulkiga iyo maamulka shirkadda Isgaadhsiinta ee TELCOM, shaqaalaheediina kala dirtay.
“Haddaba, waxa shirkadaha Dahabshiil Group si rasmi ah u caddaynayaan in uu warkaasi yahay ku-tiri-ku-teen, mala-awaal ah oo xaqiiqada ka fog. Shirkadaha Dahabshiil Group waxba kalama socdaan, wax lug ahna kuma laha arrimaha u gaarka ah Shirkadda TELCOM.
“Waxa Shirkaddda Dahabshiil bulshadu ku baratay, kuna tixgelisaa, adeeg hufan, ammaano iyo u-dhego-nuglaanta arrimaha la xidhiidha daryeelka bulshada.
“Sidaa darteed, shirkadda Dahabshiil waxay u taagan tahay daryeelka iyo u-adeegidda bulshada goor kasta iyo goob walba iyada oo aaminsan in bulshadu horumar ku gaadhi karto dhiirrigelinta fursadaha shaqada iyo kobcinta dhaqaalaha.” Ayaa lagu yidhi qoraalka.
Dhinaca kale xarunta Shirkadda TELECOM, ayaa albaabada loo laabay todobaadkii hore. kadib markii ay dacwad ku fureen shaqaalhii ka shaqaynayay ee shaqada laga fadhiisiyay, isla markaana Maxakamadda Hargeysa amartay in lasoo xidho xafiisyada xarunteeda ugu weyn ee Hargeysa, waxaana dabada loo geliyay gaadhiga dusha ku sita Laxaamada, kaas oo laxaamaday albaabada xafiisyada. Laakiin laba maalmood ka dib ayaa xafiisyada shirkadda dib loo furay.
Published June 24, 2012 By info
Xukuumadda Somaliland Oo Baaq Qaylo-dhaan Ah Kasoo Saaratay Xaaladda Abaraaha Ka Taagan Deegaamo Badan Oo Dalka Ah
Xisbiga Kulmiye Oo Munaasibad Balaadhan Kusoo Bandhigay Musharaxii Ugu Miisaanka Weynaa Ee Ugu Shacbiyad Badnaa Tartamayaasha Golaha Deegaanka Hargeysa Ee Xafladaha Qabsada